Top 10 Card Games u Android
Kulan Card heshay ay caan dhowr sano ka hor. Kuwaas waxaa kulan si sahlan loo sidato oo fudud oo-ka-ciyaar ahaayeen isha hore madadaalada ee Musefeni. Si kastaba ha ahaatee adduunka ayaa si deg deg ah u qoondeeyey oo si leeyihiin baahiyo ciyaaraha our. Hadda, cimrigeenna aan telefoonada smart yihiin guri aad dhowr ah oo kulan ka mid ah qaybaha kala duwan laakiin kulan card weli jira dad badan oo jecel. Ilaalinta doorashada tan maskaxda, turubka kala duwan oo la soo saaray ilaa iyo haatan. Waxaad si fudud u ciyaarahan card u android ka dukaanka play android ka heli kartaa.
Halkan waxaa ku qoran liiska yar oo qaar ka mid ah kulan card ugu fiican ee aad telefoonada smart ee 2015:
Waa mid aad u fudud in uu ka ciyaaro ciyaarta kaarka halkaas oo tirada bullheads kaarka go'aan goolasha. Guuleystaha waxaa uu yahay ciyaaryahanka ayaa helay tirada ugu yar ee bullheads. Waa kulankii kaamil ah, si loo dilo markii halkaas oo nasiib waxaa loo arkaa ka muhiimsan istaraatijiyad.
Loosoo waa ciyaar u gaar ah khiyaali meesha kaararka waxaa la siiyay awood aan xad lahayn. Ciyaaryahanka ayaa waxa uu leeyahay in la dhiso dusha turubka iyo kula dagaalamaan cadaawayaashooda. Updates kala duwan ee app ciyaaraha taas ayaa durba la sii daayay ilaa hadda.
A weli kulan kale oo card khayaalka, waxaad huwataa Heroes ku lug leedahay dhawr istiraatiijiyadood, oo waxaad sidoo kale u ciyaari karo hab offline ah. Iyadoo doorashadda multi-ciyaaryahan, ciyaarta bixisaa ciyaartoyda ay la tiro ka mid ah qaababka kale.
Kulankaan qaadataa si heer cusub oo dhan kulan kaarka. Isku darka A gaarka ah ee laadhuu iyo turubka, ciyaaryahanka dooran kartaa 5 characters iyo kartida ay la qarxiyeen doonaa oo ku saleysan kaararka in ay helaan.
Waxaa la bilaabay 2014 daahay, waa mid ka mid ah kulamada ugu kaarka la sugayay ee Android. Caqabadda kaliya ee ciyaarta waa in la heli karo oo kaliya ee telefoonada la size screen ka badan 6 inches. Waxaad u ciyaari kartaa saaxiibadaa ama colka hidi.
6.Live Holdem turub Pro
Beddelka kala duwan ee ciyaarta kaarka jir ah ayaa mar horeba la sii daayay suuqa dhexdiisa, laakiin haddii aad weli doonayaa inaan u ciyaaro ee turub style jir markaas ma jirto wax ka khayr badan kulankaan.
Magic waa mid ka mid ah kulamada ugu wanaagsan ee kaarka la sii daayay 2015 Iyadoo ku salaysan fikirka ah khiyaali ah, Magic ogolaanayaa ciyaartoy si ay u furo kaararka sida ugu dhakhsaha badan ay u barbareeyo kor.
8.Solitaire ahee Pack
Mid ka mid ah kulan aad loo jecel yahay ee Windows, turubka ayaa soo socdo sameeyey adduunka android galay. Turubka ahee Pack waa ciyaar daaqadaha fudud oo la soo baakadeeyey hadda u android. Xeerarka, ujeedada iyo naqshadeynta waa isku mid sida ay version dhaqanka daaqado.
Kulan kale oo card ka horumarinta ee loosoo, Star kaarto ma aha oo kaliya isku daraa kaarka la khiyaali laakiin hadda waxay kaloo leedahay element sci-fi ah ku rakiban yihiin. Iyada oo mawduuc Galaxy, interface ee ciyaarta u muuqdaan si soo jiidasho badan.
10.World Taxanaha of turub
Haddii aad tahay taageere dhagxbaa ee turub, ka dibna ciyaarta hubaal haboon hari aad. Iyadoo ay xulashada multi-ciyaaryahanka, ciyaarta waxay bixisaa dhowr qaababka kale sida looxyadii hoggaamiye.
> Resource > Emulator > Top 10 Card Games u Android